Ndị na-emepụta ihe mgbochi, ndị na - eweta ya - ụlọ ọrụ nrụpụta nke China
Okwu mmeghe: A na-eji ihe nkedo mgbatị, nkuku, na njikọ ọnụ. Sialral aluminom ejiri waya waya nwere ike siri ike, enweghị nchekasị siri ike, ma rụọ ọrụ na ichebe na inyeaka ujo nke eriri anya. akụrụngwa gụnyere: waya na - akwado eriri ikuku, na - akwado akụrụngwa njikọ njikọ ike ike dịkarịa ala karịa 95% nke ike eriri akara nke eriri. Echichi bụ convenie ...
Quadrant Nje clamps
ụdị osisi wedge na mkpuchi mkpuchi （NXL）
Ngwa NXL usoro pịrị ọnụ akanye ụdị tensioning waya mwekota adabara 20kV na n'okpuru nkesa edoghi, na-efefe n'elu gwara mmanụ aluminum eduzi ma ọ bụ iferi eduzi na-ofu na mkpuchi nke nkuku ma ọ bụ ọnụ tensioning mkpanaka, ka idozi ma ọ bụ ikesiike na-efefe n'elu eduzi, mkpuchi mkpuchi na tensioning waya mwekota kenha ojiji, kpọọ ọrụ nke mkpuchi mkpuchi. Njirimara akụkụ 1. Họrọ agwa unmagnetic nke dị elu na-eme ka ikuku aluminom na-eguzogide ya, enweghị ihe efu ...
pịnye ụdị mkpanaka （NXJ）
Ngwa NXJL usoro dị mma maka idozi na ịgbanye n'elu wiredị bụ isi (JKYL) nke nwere eriri insulator na njedebe ma ọ bụ nsọtụ abụọ nke ngalaba mgbatị nke 1-10kV na n'okpuru. Ngwaahịa dịka nkọwa waya si kwadebe ya dị iche iche. Nhazi usoro Shell mere nke mgbochi oxidate ike dị elu nke alloy, na-enweghị ike mkpofu Isi nke wedge mere nke na-eme ka plastik na-ewusi ike, nwere ezigbo mkpuchi Ọ bụghị wepụ mkpuchi la ...
NXJG Series mkpuchi nje mwekota (nkpirikpi ụdị)
Ngwa ： NXJ usoro kwesịrị ekwesị maka idozi na ọdụdọ ikuku a na-agwa mmanụ (LKLYJ) nwere eriri insulator na nsọtụ abụọ nke ọnụ ma ọ bụ nke eserese nke 20KV na n'okpuru. Ngwaahịa dị iche iche wedge plastik dị iche iche dị ka nkọwa ntanetị Structure feature ： 1The shei ka nke mgbochi - ọxịdashọn elu - ike aluminum alloy na-enweghị teepu ọnwụ 2Wedge isi ka nke elu ike engineering plastic na ezi mkpuchi performa ...
Ngwa NJJ usoro pịrị ọnụ wedge type mkpuchi tensioning cable mwekota adabara gwara na tensioning efefe a gwara mmanụ Gịnị (JKLYJ) na njedebe ma ọ bụ ma na nsọtụ abụọ nke tensioning ngalaba nke 1kV na n'okpuru aluminum eriri. Nhazi usoro A na-eji shei na eriri ihu dị elu nke ike eriri USB na-enweghị ịgbanye ihe mkpuchi ahụ, nwere ike itinye ya ozugbo. Ọdịdị Wedge, mfe wụnye na a pụrụ ịdabere na ya. Xinwom bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-elekwasị anya na nyocha ...
Nje mwekota NY haịdrọlik type1
Eriri mwekota （haịdrọlik ụdị NY usoro haịdrọlik mkpakọ erughị ala mbanye na-eji ndozi na jikọọ eduzi n'elu erughị ala insulator eriri ma ọ bụ oyiyi akwa na poolu na ụlọ elu site na-akwagide ọdụdọ ike site eduzi. Emere ya nke nwere ike aluminom na ihe ndi nwere ike, ya na elu ya na oge ojiji siri ike, ka odi ugbua o di nfe maka ntinye, enweghi nke hysteresis, obere carbon na nchekwa ike. Mgbu mwepu rain Nchara arịlịka dum） Katalọgụ Mba ....
Eriri mwekota, bolt ụdị） NLD usoro bolt ụdị erughị ala clamps na-bụ-eji na-eguzo electric ike akara ma ọ bụ substation, anyịnya eduzi conduction na àmụmà eduzi na-na-eji na iso na nje insulators site n'isonyere ngwaike ma ọ bụ na-esonye àmụmà eduzi na perch. Ngwunye ahụ na ndị na-elekọta ya bụ ígwè na-edozi ahụ, ihe nchara nchara na-arụ ọrụ, akụkụ ndị ọzọ bụ nchara. Ijigide ike nke mwekota bụ ihe karịrị 95% agbaji ike nke onye nduzi. Ca ...
Nje mwekota NLL-1
Nje mwekota, bolt ụdị） NLL usoro bolt ụdị erughị ala mwekota na-bụ-eji na-eguzo electric ike akara ma ọ bụ substation, anyịnya conduction akara na àmụmà eduzi na-na-eji na iso na nje insulators site n'isonyere ngwaike ma ọ bụ iso na àmụmà eduzi na perch. Ezubere ya maka eriri ikuku ruo 30kV. 1) Kwesịrị ekwesị maka idozi onye na-eduzi aluminom ma ọ bụ onye na-eduzi aluminom na-agba ọtọ na ntụgharị ma ọ bụ insulator nke ọnụ mmiri, iji dozie na tig ...